vs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် setup file လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
vs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် setup file လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
22-09-2011, 01:48 PM
vs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် setup file လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ရအေ&#
စနိုးတို့ ဒီတခါ ကိုယ်ပိုင် setup file လေးတစ်ခု ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ solution ကို right click ထောက်ပြီး new project တစ်ခုယူလိုက်ပါ
Add New Project ကနေ setup project ကိုရွေးပါ အဲ့ဒီမှာ Name ကို စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရတယ်
ဘောက်တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ် အဲ့ထဲက Application folder ထဲမှာ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ data တွေကို folder လေးတွေ ဆောက်ပီး တခါတည်း ထည့်လို့ရတယ်
(ဥပမာ - ကိုယ်က ပုံတွေသုံးထားရင် တခါတည်းထည့်ပေးဖို့ပါ)
ခုစနိုးကတော့ MessageBox အတွက် Icon တွေ သုံးထားတော့ Icon အတွက် File တွေ ထည့်ပေးထားတာပါ
ကိုယ်ထည့်ချင်တာတွေ အားလုံးထည့်ပီးရင်တော့ setup file ထုတ်လို့ရပါပီ အောက်ကပုံအတိုင်း Project Output တစ်ခုယူလိုက်ပါ
အဲ့ဒီမှာ ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲမှာ Project နေရာမှာ ကိုယ်ချိတ်ချင်တဲ့ Project ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Setup Project ကို ထောက်ပီး Build လုပ်လိုက်ပါ အောက်နားမှာ Build Succeed ပေါ်လာရင်တော့ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Setup File တစ်ခု ရသွားပါပီရှင်
ဒါလေးကို သုံးချင်တဲ့စက်မှာ install လုပ်ပီး သုံးရုံပါဘဲ
အော် အဲ့ဒီမှာ စနိုးပြောဖို့ တစ်ခုကျန်သွားတယ် Setup Project ရဲ့ Properties ထဲက Author နဲ့ Manufacturer နေရာတွေမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေးလို့ရပါတယ် ဘာမှမပြင်ရင်တော့ Default Company Name ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဝင်သွားပါတယ်
ဒီပို့မှာစနိုးရေးထားတဲ့ program လေးရှိပါတယ် အဲ့ဒီအတွက် ခု setup file လေး ထုတ်ပေးထားတာပါ အဆင်မပြေရင်လည်း ပြောပါရှင် စနိုးလည်း တတ်နိုင်သလောက် ပြောပေးပါ့မယ် စနိုးလည်း ခုမှ လေ့လာနေဆဲ သူတစ်ယောက်မုိ့ပါ ခင်မင်လျှက် စနိုလေး
Last edited by စနိုးလေး; 22-09-2011 at 01:53 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်တိုး, အေးမင်းမောင်, AZM, bagothar85, essential, minthike, minthumon, PyaitSone, smlat88, tu tu, zo
ပို့စ်5ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - vs နဲ့ ကိုယ်ပိုင် setup file လေးတွေ ဖန်တီးကြ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စနိုး။ ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာရပ်ထဲမှာ ဘယ်ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတာ အကောင်းဆုံးလဲ။ အခြေခံအကျဆုံးလဲ။ အကိုသိထားတာနဲ့ အမြင်တူမတူသိချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ခေတ်သစ်တော်ဝင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, smlat88, zo
Find More Posts by ခေတ်သစ်တော်ဝင်
27-09-2011, 08:47 PM
Originally Posted by ခေတ်သစ်တော်ဝင်
ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတာတော့ ပြောရခက်တယ်ရှင့် သူ့ language နဲ့သူတော့ အားသာချက် အားနည်းချက်ကတော့ ရှိတာပါဘဲ စနိုးလည်း သေချာတော့ မသိဘူးရှင့် အပြင်မှာ c#တို့vbတို့ ကတော့ အသုံးများတယ် အလုပ်ရှာရလွယ်တာပေါ့နော် java ကတော့ အရမ်းအနုစ်ိတ်တော့ သိပ်မလွယ်ဘူးလေ web အတွက်ကတော့ asp.net တို့ php တို့ အသုံးများတယ် ဒါကတော့ အကိုရယ် ကိုယ်သန်ရာသန်ရာပေါ့ စနိုးလည်း ခုမှ စမ်းတဝါးဝါးလေ့လာနေသူ တစ်ယောက်ပါ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်ဘာသာရပ်ကို လေ့လာတာ အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ စနိုးပြောလို့မရပါဘူး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အကိုအမတွေက ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မယ်နော် ခုလို စနိုးပို့တွေ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ခင်မင်လျှက် စနိုးလေး
Last edited by စနိုးလေး; 27-09-2011 at 09:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ စနိုးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခေတ်သစ်တော်ဝင်, bagothar85, minthike, tu tu, zo
programming language မှာ အ ကောင်း ဆုံး ဆို တာ တော့ မ ရှိ ပါ ဘူး။ ကို ဖြေ ချင်း နေ ရ တဲ. ဟာ ပေါ် မူ တည် ပီး သင့် လှော် တဲ. language ကို သုံး နိုင် ဖို. က ပို အ ရေး ကြီး တယ် ဆို ကြ ပါ တယ်။
မြား သော အား ဖြင့် programming forum တွေ မှာ ဘယ် ဟာ အ ကောင်း ဆုံး လဲ/ A language vs B language လို topic တွေ က flame war တွေ ပဲ ဖြစ် သွား တတ် ကြ တယ်။
အ ခြေ ခံ 'Concept' ဆို ရင် က တော့ C , assembly လို low level language တွေ ပဲ ဖြစ် မယ် ထင် တယ်။
Developer တစ် ရောက် ဖြစ် ဖို. ဆို ရင် တော့ အ နဲ ဆုံး ၂ languages လောက် master နိုင် ပီး အ ခြား languages တွေ လဲ နဲ နဲ ပါး ပါး သိ ထား ဖို. အ ရေး ကြီး မယ် ထင် ပါ တယ်။
Last edited by Bayint Naung; 27-09-2011 at 11:24 PM..
စနိုးလေး, ဦးသာကြီး, ခေတ်သစ်တော်ဝင်, bagothar85, g00gle, minthike, tu tu